Tantara - PADAP
Manana harena voajanahary maro izay afaka trandrahina soa aman-tsara i Madagasikara. Hananany avokoa na ny toetr’andro, na ny velaran-tany azo volena, ny ala midadasika, ny tahiry harena kibon’ny tany, ny harena voajanahary tsy manam-paharoa. Izy ihany koa dia manana loharanon-drano azo havaozina, izay tombanana ho 337 kilometatra toratelo isan-taona. Ampy amin’ny filàna mifandraika amin’ny fampiroboroboana ny tetikasa rehetra mifandraika amin’ny fampidirana rano izany.
Ratsy fitantanana ny harena voajanahary
Tsy ny fananana harena voajanahary maro karazana no mampanan-karena an’i Madagasikara. Madagasikara manko dia tafiditra anatin’ny lisitr’ireo firenenana mahantra indrindra maneran-tany, noho ny tsy fandriam-pahalemana ara-tsakafo izay mihatra amin’ny 20 isan-jaton’ny mponina ao amin’ny.
Ny tsy fahampian’ny fitantanana ny loharanon-karena voajanahary no fototr’ity loza ity. Ary voa maika mampitombo ny toe-javatra koa ny tsy fahampian’ny fotodrafit’asa.
Fampiasana ireo fomba fambolena nentim-paharazana
81 isan-jato ny fianakaviana eto Madagasikara, ny 89 isan-jaton’izay dia monina any ambanivohitra ary mivelona amin’ny asa fambolena avokoa. Izany ny mahatonga ny fambolena hanana toerana lehibe eo amin’ny toe-karem-pirenena.
Tsy mampiasa teknolojia nohatsaraina ireo tantsaha, toy ny ireo masom-boly misy zezika, na ny zezika ary ny milina fambolena. Ka dia voafetra ihany ny fampiharana ny fambolena ary ambany ny vokatra azon’ireo. Maniry ny hampitombo ny famokarana ary hametraka ny zon’ny fananan-tany izy ireo ka dia nampiasa ny “Tavy”.
Amin’ny ankapobeny, ity endrika nentim-paharazana amin’ny fambolena ity anefa dia manimba ny ekolojia. Ny fambolena ny vary, mangahazo ary voly hafa mifandimby amin’ny “Tavy” dia manimba ny tany ary miteraka fikaohonana lehibe izay mandray anjara amin’ny fitonin’ny renirano, izay mitarika haingana amin’ny fahasimban’ny tany sy rano.
Ny PADAP dia te hanome endrika vaovao ny fambolena malagasy
Nanapa-kevitra ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny jono (MPAE) sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy fa hamatsy vola amin’ny tetikasa PADAP mba hamahana na dia ny ampahany amin’ireo olana etsy ambony ireo aza.
Ny fampiharana ny tetikasa PADAP dia tombony lehibe ho an’ny tontolo iainana sy ny toe- karena eto Madagasikara noho izy mifantoka amin’ny fitantanana ny harena voajanahary. Ity tetikasa ity dia mety hanamaivanana ny fiainana andavanandron’ny Malagasy 4 amin’ny 5 izay mivelona amin’ny asa fambolena.